सरकार कसको ! नेकपाको की ? केपी ओलीको ? -
सरकार कसको ! नेकपाको की ? केपी ओलीको ?
काठमाडौँ । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ । संसद विघटनको प्रतिरक्षामा सरकारी पक्षले बहस गरेपछि त्यसको जवाफमा पुनः रिट निवेदकको तर्फबाट बहस भएको हो ।
जवाफी बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नेपालको संविधानले नदिएको जिकिर गरे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रश्न गरे, अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ?
पोखरेलले नेकपाको हो भनी जवाफ दिए ।
त्यसपछि जबराले फेरि प्रश्न गरे ‘नेकपाको हो भने उसंग बहुमत छ । अर्थात् धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो, अब (सरकार बनाउन) धारा २, ३ र ५ मा जाने अवस्था कहां छ संविधानमा ? उपधारामा १ बमोजिम सरकार बनिसकेपछि बांकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले सरकार कसरी बन्छ भन्ने विषय संसदीय प्रक्रियामा मात्र थाहा हुने बताए । ‘यो हामीले चिन्ता गर्ने विषय होइन श्रीमान् । प्रक्रियामा गएपछि संसदले हेर्छ । नेकपाले अर्को संसदीय दलको नेता दिनै सक्दैन ? त्यति निकम्मा भैसक्यो नेकपा ? प्रोसेसबाट सरकार नआउने अवस्था हुनुप¥यो विघटनमा जान’ उनले भने ।